Semalt: I-WordPress Plugin yeSayithi lakho - Advice Top
Iingqungquthela ze-WordPress zenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukwakha iindidi zewebhsayithi. Nangona kunjalo, inkqubo yoyilo yenza ukhetho olunzima kakhulu. Ngethamsanqa, ngoku kunokwenzeka ukuphula ilayibrari ukuya kwiinqanaba ezinengqiqo ze-free okanye i-premium, kunye nenjongo eyodwa okanye iindimu ezininzi - mobel art transport.
U-Oliver King, enye yeengcali ezinolwazi oluvela kwi i-Semalt , inika kwinqaku inqaku eluncedo malunga naloo nto ukuba uqwalasele.
Ulwahlulo phakathi kweeNtetho ze-WordPress ze-Free kunye ne-Premium
I-WordPress inceda ukubeka isiseko kwiwebhusayithi yakho. Umxholo ogqwesileyo we-WordPress wenza kube lula ukwenza isiza sakho kwisimo sakho. Khetha nje into ehambelana nokuyila kwakho. Kufuna ukuba uqale uqonde ukuba zeziphi iindlela ezikhoyo.
I-Pros and Cons Cons of Themes WordPress Izihloko
Iingqungquthela ze-WordPress zamahhala zilungele ukuba abo babasebenzisi abangenawo uhlahlo lwabiwo-mali bafuna iisombululo zewebhusayithi. Iingqungquthela zamahhala azivelisi inzuzo kubathuthuli ngencazelo. Abathuthukisi banokuthi bakhululwe, ngezinye iimeko, ukunikezela ngenkxaso ezinikeziweyo okanye ukuhlaziya rhoqo kubasebenzisi babo. Isiphumo kukuba sishiya iwebhusayithi ekhuselekileyo kwimingcipheko yokhuseleko.
Zininzi iintetho zamahhala abasebenzisi abangasebenzisa kwiiwebhusayithi zabo. Nangona bengabathengi, gcinani engqondweni 'umthengi uqaphele' isakhelo sengqondo kwaye nihlale niqaphele ukuba zeziphi izihloko owakha iwebhusayithi yakho.
I-Pros and Cons Cons ye-Premium ThemesPress Themes
Inzuzo yokuba iingqungquthela ze-premium ezingaphezu kwamahhala kukuba ziza neenkxaso ezizinikeleyo. Bayibeka umrhumo wesikhathi esisodwa ekuthengeni, kodwa oku kungatshintsha kuxhomekeke kwinani leziza umsebenzisi anqwenela ukuzifaka kuzo. Iingqungquthela ze-Premium zifumana ukuhlaziywa rhoqo kwaye zikhuselekile. Ngamanye amaxesha aphelisa ukuvalwa ngenxa yokuba kukho rhoqo ukukhawuleza ukukhulula ezinye iinkalo nangona bengenakulungele bonke abasebenzisi.
Ukwahlukana phakathi kweNjongo eyodwa kunye neenjongo ezininzi ze-WordPress
Ukukhetha phakathi kwentetho ye-WordPress yamahhala kunye ne-premium kuyisinyathelo esinye kuphela ukuya ekunciphiseni ukuya kwisigidi sakho. Emva koko, kufuneka unqume ukuba ingaba iwebhusayithi yakho iya kufuna umxholo omnye wenjongo okanye inxalenye eyodwa. 10)
Iinkonzo kunye neentengo zeNjongo eziZodwa eziPhambili zePressPress Themes
Iingqungquthela zeenjongo ezizijolise kwi-subset ethile yewebhusayithi. Ngokomzekelo, ingaba uhlobo lwesayithi njengeblogi, okanye itshishini elithile.Banceda abasebenzisi ukuba banikezela umkhiqizo 'wokuhlaselwa' kwaye badla ngokunciphisa kunezihloko ezizimeleyo. Ngokunciphisa ukusetyenziswa kwabo, unokulindela inkxaso ephezulu.
Umda wokunciphisa umxholo awuxhasayo indawo yokuguquguquka. Kuthetha ukuba xa ngexesha elizayo uvakalelwa kukuba uguqula isayithi lakho, ngoko kufuneka ufune into entsha kuba umxholo omnye wenjongo awuyi kwenza okuyimfuneko.
Iinkonzo kunye neNgxowa yeenjongo ezininzi ze-WordPress
Isihloko esicwangcisiweyo siyimxholo omnye kunye nezixhobo ezininzi kunye nemisebenzi ejoliswe ekuphuculeni isabelo sabo semarike. Ezi ngqungquthela zinomqolo obanzi wokwakhiwa kwangaphambili nokwakhiwa kweemodos kunye ne-plethora yeempawu kunye neefowuni zeWindowsPress. Ukudibanisa kwenza ukuba kube nokwakha nayiphi na iwebhusayithi kwiyiphi imfuno efunwayo. Okukuphela kwezinto ezikhoyo zizo zizaziso ezinomgangatho ophezulu wokusebenza komgangatho. Ukuba ukhetha isihloko esiphezulu se-multipurpose, awunakuze uthenge omnye umxholo kwikamva. Iingongoma ezininzi zixhomekeke ekubanjeni izibilini kwaye akuzona iifanele ezifanelekileyo zokufumana iimfuno ezizodwa.
Inkcazo yokukhetha iNqaku elifanelekileyo
1. Uhlahlo lwabiwo-mali: khetha isihloko esingasimahla ukuba unayo imali yokuchitha. Ngaphandle koko, ukuchitha imali kumgangatho kunokukunceda kakhulu kwikamva.
2. Yintoni oyakhayo? Khetha isihloko esisodwa senjongo ukuba uyayazi uhlobo lwewebhusayithi ofuna ukuyihlakulela, unesiqiniseko malunga neempawu ezifunekayo, kwaye uqinisekile ukuba ezi zidingo azikhethiweyo ukuba zitshintshe naliphi na ixesha kungekudala. Ukuba ukhangele ukusebenza okungafaniyo kunye nokuguquguquka, umxholo ongeyena mnye ungcono ukubheja.
Ezinye zeendawo onokuqala ngazo ukukhangela izihloko ziyi-WordPress.org kunye ne-ThemeForest. Iingqungquthela zamahhala zizodwa kwi-WordPress.org, kodwa unokutyelela i-ThemeIsle, iHeroThemes, okanye i-Nimbus Themes kwi-premium search theme.
Naphezu kweengxaki zeencwadana ze-WordPress, ukukhetha okulungileyo kukuhla okuya kufanelana nebhajethi yakho kwaye oko kuhambelana neemfuno zakho zewebhu.